China Pipeline okpomọkụ ihe mmetụta Manufacturer - Ogo Pipeline okpomọkụ ihe na-ekwu - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta > Pipeline okpomọkụ ihe mmetụta
A na-ekpochapu ihe mmetụta ahụ n'ebughị ụzọ kwụsị ịghọta ngwa ngwa disassembly na nzukọ nke ihe mmetụta. A na-anabata ihe mmetụta okpomọkụ nke okpukpu abụọ nke ọkpọkọ na ebe a na-atụle nke ikuku ikuku, pipeline mmiri na pipeline mmanụ.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Pipeline okpomọkụ ihe mmetụta na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Pipeline okpomọkụ ihe mmetụta dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.